Iyo nyowani vhezheni yeSystemRescueCd 5.3.1 yaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeSystemRescueCd 5.3.1 yakatoburitswa kare
Shanduro itsva ye SystemRescueCd 5.3.1 yave kuwanikwa kurodha pasir, nekuti nguva pfupi yadarika mugadziri wechishandiso ichi chekununura akaburitsa vhezheni yayo nyowani 5.3.1 nekuvandudza nyowani uye kugadzirisa bug
Kune avo vaverengi vasingazive iyo system, ini ndinogona kukuudza izvozvo SystemRescueCd inzira yakagadzirirwa kugadzirisa yeiyo system inoenderana neGentoo.
1 Pamusoro peSystemRescueCd
2 Kuburitswa kutsva kweSystemRescueCd 5.3.1
3 Dhawunorodha vhezheni itsva yeSystemRescueCd 5.3.1
Iyi system inovavarira kupa nzira yakapusa yekuita manejimendi mabasa pakombuta yako yekukanganisa kupora uye data, pamwe nekugadzira nekugadzirisa hard drive partitions.
Iyo inouya neakawanda Linux software, senge system maturusi (akapatsanurwa, chikamu, fstools,…) uye zvekushandisa maturusi (editors, pakati pehusiku mutungamiriri, network maturusi).
Inogona kushandiswa kune ese maLinux neWindows makomputa, uye pamatafura nemaseva.
Iyi yekununura system haidi kuisirwasezvo inogona kubviswa kubva paCD / DVD drive kana USB tsvimbo, asi inogona kuiswa pane rakaomarara dhiraivha kana zvichidikanwa.
Kernel inotsigira ese makuru mafaira masisitimu (ext2 / ext3 / ext4, reiserfs, btrfs, xfs, jfs, vfat, ntfs), pamwe nenetwork faira masystem (samba uye nfs).
Inoshanda zvizere uye yakamira Linux-based operating system, iyo inogona kumhanyisa kubva ku bootable CD kana DVD dhiraivhu, kunyangwe kana komputa huru yekushandisa isingabhure.
Inotsigira anotevera mafaira masisitimu: EXT2, EXT3, EXT4, Reiserfs, Reiser4, BTRFS, XFS, JFS, VFAT, NTFS, ISO9660.
Tsigiro ye network network masisitimu: Samba neNFS
Gadzira, gadziridza, teedzera, dzoreredza hard drive zvikamu.
Kukwanisa kugadzira backup ye data rako.
Kuvapo kwehuwandu hwesisitimu zvinoshandiswa (Zvakakamurwa, Chikamu, Maficha, uye zvimwe zvinoshandiswa).
Iko kuwanikwa kweMidnight Commander faira maneja inobvumira mafaera uye madhairekitori mune akasiyana zviito (kuteedzera, kudzima, kufambisa, kutumidzazve zita, etc.
Memtest + - RAM bvunzo
Sisitimu maturusi eLinux neWindows mafaira masisitimu
Network zvishandiso (semuenzaniso, Samba, NFS, ping, uye nslookup)
Kuburitswa kutsva kweSystemRescueCd 5.3.1
Chinangwa chekuburitswa kutsva kwesystem ndechekugadzirisa zvakawanda zvezvinhu zvikuru zvehurongwa., pamusoro pekugadzirisa kernel yayo kune imwe nyowani, yakagadzikana vhezheni ine bug fixes uye chengetedzo.
SystemRescueCd 5.3.1 ikozvino ine main kernel yakagadzikana Linux LTS 4.14.70 kernel, uye inoshandisa Grub 2.02 yeEFI Boot.
Kunze kweizvi yakawedzera rutsigiro rwekutora kubva kuNVMe disk uye iyo sisitimu inowanikwa ne partclone-0.2.89.
Rakazara pasuru runyorwa rwakaratidzwawo pane shanduro dzemapakeji akaisirwa musystem.
Iine nyowani yakagadziridzwa system Kernel zvakare akati wandei e diski maturusi akagadziridzwa Uye zvakare, iyo default desktop desktop mune ino kugovera ichiri XFCE.
Izvi zvinopa sisitimu zvirinani kuenderana ne ext2, ext3, ext4, ReiserFS, reiser4fs, Btrfs, XFS, JFS, VFAT, NTFS pamwe nezvimwe zvakaita seIO9660 uye network mafaira masisitimu akadai seNFS neSamba.
Chekupedzisira, zvakakosha kutaura kuti iyi 32-bit system uye yeiyo ndeimwe yezvikamu zvishoma zvinoramba zvichitsigira ichi chivakwa.
Dhawunorodha vhezheni itsva yeSystemRescueCd 5.3.1
Uku kuburitswa kutsva kwe SystemRescueCd ine huremu hwe573.9 MB chete kuti inyorwe paCD kana 1GB USB memory.
Kuti uwane ichi chitsva chifananidzo ingo enda kuchikamu chekurodha pane webhusaiti yepamutemo yekuparadzira.
Uyewo, pano pawebhusaiti yepamutemo yekugovera iwe unowana akasiyana emanyorero emashandisirwo, ayo anoitirwa kune vese vatangi uye vashandisi vemberi.
Kana ivo vanogona kutaurwa zvakananga kune inotevera chinongedzo kurodha pasi. Iwe unogona kusevha iyo yekugovera mufananidzo kune yako USB tsvimbo nerubatsiro rweEtcher. Dhawunirodhi yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo nyowani vhezheni yeSystemRescueCd 5.3.1 yakatoburitswa kare